यिनै बालक थिए शेरधन राई « Deshko News
यिनै बालक थिए शेरधन राई
भोजपुर, कार्तिक १९
साढे तीन दशक अघि आफ्ना मामाले भलिबल खेल्नका लागि मिकासा बल भान्जा शेरधन राईलाई किनिदिदा गाउँघरमा कम्ता चर्चा थिएन् । मामाले किनिदिएको मिकासा बल बोकेर पाखामा खेल्न निस्कदा उनका साथीभाइले वरिपरी घेरिसकेका हुन्थे ।
गाउँघरमा अहिले पनि मोजाको बल खेल्ने समय छँदा यतिबेला पनि नामी मानिने त्यो मिकासा बल देख्दा र खेल्न पाउँदा उनका साथीभाई दंग हुन्थे । त्यही मिकासा बलको आकर्षणबाट भलिबल खेल सुरु गरेका शेरधन उमेरको २०–२२ बर्ष हुँदा जिल्लाको भलिबल खेलमा नामुद खेलाडीको रुपमा परिचित बनिसकेका थिए ।
आखिर उनको जीवनले पनि नयाँ मोड लियो । उनि राजीतिमा लागे, राजनीतिमा लागेको करिब साढे दुइ दशकपछि त्यो समयका चर्चित भलिबल खेलाडी शेरधन बिहिबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री बनेका छन् । साथै सरकारकाे प्रवक्ताकाे जिम्मेवारी पनि ।
२०२७ सालमा भोजपुरको विकट थिदिंखा–५ पसल भन्ज्याङ्गमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका शेरधन राई २०७० मंसीर ४ मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भोजपुर क्षेत्र नं २ बाट सभासदमा निर्वाचित भएका थिए । ०४४ बाट अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीतिक जीवन शुरु गरेका राई एमालेको खम्बाका रुपमा परिचित छन् ।
अखिलको प्रा.क. बाट शुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रामा जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रिय सदस्य, पूर्वाञ्चल संयोजकको कुशल भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ । २०४५ बाट एमाले पार्टीको संगठित सदस्यता लिएका राई यतिबेला एमालेको बैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यको हैसियतमा छन् ।
०५४ मा माले एमाले विभाजित हुँदा राई एमालेमा उपसचिव थिए । अधिकांश नेता कार्यकर्ता पार्टी विभाजनसँगै मालेमा जाँदा राई एमालेमै रहे ।
त्यसपछि बिचरा अवस्थामा रहेको एमाले भोजपुरको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका राईले ०७० बैशाखसम्म लगातार चार कार्यकाल जिल्ला पार्टीलाई कुशल नेतृत्व दिए । संविधानसभा विघटनसँगै एकल पहिचानको विषयलाई लिएर अशोक राईहरु बाहिरिन लाग्दा उनले त्यो कदमलाई रोक्न हरदम प्रयास गरे ।
कतिपसम्म भने त्यतिबेला २४ जिल्लामा एमालेका जनजाती जिल्ला पार्टी अध्यक्षहरुको नेतृत्व गरेर अशोक राईहरुसँग पटक—पटक संवाद बढाए । उनको त्यो पहलकदमीले एमाले ठुलो क्षतिबाट जोगिन पुग्यो ।
यद्यपी अशोक राई लगायतका केही जनजाती नेताहरुले संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे । उनले त्यसबेला खेलेको सन्तुलित भूमिकाले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा चर्चा पाएको थियो भने उक्त भूमिकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो तरंग पैदा गरेको थियो ।
एकल जातीय पहिचानको मुद्धा छ्यापछ्याप्ती भएको त्यो बेला शेरधनले आफ्नो राजनीति जीवन नै दाउमा राखेर बहुबहिचानको मुद्धा ओकालत गरेका थिए । अन्तत बहुपहिचानवाला मुद्धा बोकेर चुनाबमा गएका पुराना शक्ति कांग्रेस एमाले नै ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित भए ।
संविधान सभा सदस्यकाे प्रमाणापत्र लिँदै, शेरधन रार्इ
पार्टीलाई बचाउन ०५४ होस या ०६९ मा उनले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका पार्टीको इतिहासमा लेखिने उनको विश्वास छ । लामो समयदेखी पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निकट रहँदै आएका राई पछिल्लो समय तत्कालिन पार्टी उपाध्यक्ष एंव बर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विश्वास पात्र थिए ।
भण्डारी राष्ट्रपति बनेसँगै मन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको आकलन गरिए पनि यसअघि चर्चामै रहेको सन्चार मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । आफूलाई एमालेको सिपाही भन्न रुचाउने राई जब पार्टीमा विभाजन र संकट आइपर्छ तब सतिसाल झै उभिने गरेका छन् ।
उनले जिल्ला तथा केन्द्रिय पार्टी नेतृत्वमा गलत विचार र प्रवृत्तिका विरुद्ध जेहाद छेड्दै आएका छन् । जिल्लामा रहदा उनले साझा नेताको छवि बनाएका थिए ।
यतिबेला जिल्लाको राजनीति मियो बिनाको दाँइ बनिरहेका बेला उनको त्यो नेतृत्व र साझा छविको जिल्लाबासीले स्मरण गरिरहेका छन् । ०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुँदा राई देशकै कान्छो सांसदमा गनिए ।
०६४ चैत्र २८ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एमाओवादीका सुदन किरातीसँग पराजित भएका राई पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तिनै किराँतीलाई पराजित गर्दे विजयीको टिका लगाउन सफल भएका थिए । उनले ४ हजार ४ सय ८३ मतअन्तरले पराजित गर्दा ११ हजार नौ सय २७ मत प्राप्त भएको थियो ।
४५ बर्षिय राई अबिबाहित हुन भने पार्टी सदस्यता लिए यताका पुरै बर्षहरुमा उनले राजनीतिमै जीवन समर्पण गरेका छन् । एक दर्जन बढी देशको यात्रा गरेका राई राजनीतिलाई सेवाको रुपमा बुझ्छन् ।
सगरमाथा उच्च मावि घाेरेटारबाट एसएलसी गरेका राइ भाेजपुर बहुमुखी क्याम्पस हुँदै समाजशास्त्रमा स्नकाेत्तर गरेका छन् । जिल्लाको समकालिन राजनीतिमा उनि इमान्दार, निष्ठावान् नेताको रुपमा स्थापित छन् ।
सिद्धान्त र नैतिकतामा सम्झौता नगर्ने राईलाई जिल्लावासीले चुनाव जिताएर पठाएदेखी नै मन्त्रीका रुपमा हेरेका थिए । चुनावमा जनतासँग भोट माग्दा समेत मन्त्री बन्ने लगभग कबोल नै उनले गरेका थिए ।
जिल्लाको राजनीतिमा भुँइतहबाट उठेका र जिल्लाकै भूगोलमा राजनीति गरेका कारण भोजपुरबासीले मन्त्री राईबाट जिल्लामा विकासको आश गरेका छन् ।
राई त्यस्तो क्षेत्रमा जन्मेर राजनीतिमा लागेका हुन्, जहाँ नुन र पानीको सधै अभाव भईरहन्छ । रोग, भोग र शोक सँग जुधिरहेको भोजपुरका लागि राई मन्त्री भएपछिको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
दरबार हत्याकाण्डकै बेला भारतीय सेना नेपाल छिर्न खोजेको थियो !
काठमाडौं । संसार हल्लाएको १९ जेठ, ०५८ को दरबार हत्याकाण्डका बेला अनुसन्धानको सहयोगका नाममा भारतीय
झापामा सुनचाँदी सफा गर्ने बहानामा ठगी
(झापा) के तपाई आधिकारिक सुनचाँदी पसल छाडेर ‘झोले पसल’सँग सुन तथा चाँदीको बहुमूल्य गरगहना सरसफाइ
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको एक्शन, चिया बगानमै पुगेर समाधान गरे मजदुरको समस्या
इलाम, जेठ ३ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट चिया श्रमिकको समस्या सल्टाउन चिया
मेक्सिको । मेक्सिकोमा बिहीबार एक जना पत्रकारको हत्या भएको छ । देशको दक्षिणपूर्वी राज्य क्विन्ताना
विद्यार्थी र अभिभावकको झगडा छुटाउन जाँदा हेडसरको आँखा नै फुट्यो
काठमाडौं । विद्यार्थी र अभिभावकको झगडा छुट्टयाउन जाँदा प्रधानाध्यापकको आँखा फुटेको छ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर
काँग्रेस सभापति देउवाले पनि मोदीलाई दिए बधाई
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र
गान्धीले हार स्वीकार्दै मोदीलाई दिए बधाई
एजेन्सी, जेठ ९ भारतीय कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले भारतीय लोकसभा चुनावमा हार स्वीकार गरेका